I-Eufy RoboVac G20 Hybrid yokucoca ngobuchule kunye nokusebenza kakuhle [Uphononongo] | Izixhobo zeNdaba
I-Eufy RoboVac G20 Hybrid yokucoca ngobuchule kunye nolusebenzayo [Jonga]
UMiguel Hernandez | 15/03/2022 13:36 | ngokubanzi, Reviews
Eufy iyaqhubeka ukubheja kwi eqhagamshelweyo, okrelekrele kwaye, ngaphezu kwakho konke, luncedo ekhaya. Kule meko, kufuneka sithethe ngezi robhothi zincinci, zingqukuva ezineenkwenkwezi kwiividiyo ezininzi kwi-TikTok, ngokwesiqhelo ngenxa yokungathandi okukhethekileyo abaphathwa ngako ngamanye amalungu osapho, njengeekati.
Ngesi sihlandlo sihlalutya nzulu i-Eufy RoboVac G20 Hybrid entsha, enye indawo kuluhlu oluphakathi kunye nokufunxa okukhulu kunye noqwalaselo olulula. Fumana nathi olu khetho lokugqibela lwekhathalogu yokucoca edityanisiweyo esibonelelwa yi-Eufy kwaye ukuba kufanelekile ukuthathela ingqalelo abo bakhuphisana nabo.
2 Uyilo lwezinto kunye neempawu zobugcisa
3 Ukucoca kunye nokusebenza
Kule meko uEufy akazange abheje, akakhange aqalise, akakhange abe nesibindi... Masithethe inyani, kunzima ukubona i-robot vacuum cleaner etsala umdla wakho, ngokusisiseko ziyafana kwaye ndiyaqonda ukuba yiyo. ngenxa yokuba uyilo lwayo lusebenza kangangokuba ukutshintsha imilimitha enye kuya kuzisa iingxaki ezininzi kunezisombululo. Kungenxa yoko asiyi kuthathela ingqalelo ukuba lo mcoci werobhothi ufana nezinye izigidi ezithathu ezikhoyo kwimarike kwaye siza kugxila kwi-layout of hardware yayo kunye nomgangatho wezinto zayo.
Ingaba uyithandile? Yithenge ngee-euro ezingama-299,99 kuphela kwiAmazon!
Isixhobo siziisentimitha ezingama-32 ububanzi kwaye eyona nto imangalisayo kukuba ubukhulu becala buziisentimitha ezi-7,2 kuphela, kwaye kukuba u-Eufy sele esilumkisa ukuba sijongene nesixhobo esibhityileyo, into esiyiqinisekisayo. Inxalenye engasentla yenziwe ngeglasi, inomtsalane kwiiprinta zeminwe kodwa kulula kakhulu ukuyicoca, into endikhethayo ngaphezu kwe "jet black" edla ngokufakwa zezinye iibrendi kunye nokuqina kwayo okungadlulanga iintsuku ezimbalwa. Ngokumalunga nobunzima, asinawo amanani achanekileyo, kwaye sithathela ingqalelo ukuba asiyi kuthwala epokothweni yethu, andizange ndicinge ukuba kubalulekile ukuyibeka kwisikali, nangona kunjalo. iliso elihle lebhakethi Ndingakuxelela ukuba kukhaphukhaphu.
Uyilo lwezinto kunye neempawu zobugcisa
Sinayo ilungiselelo ngokwesiko ngokwezinto zesiseko esisezantsi se-Eufy RoboVac G20 Hybrid, kunye nomtshayelo odibeneyo ophakathi, kunye ne-silicone kunye ne-nylon bristles, ngokombono wam eyona nto isebenzayo kuzo zonke iintlobo zemigangatho. Ikhatshwa ngokulandelelana ngamavili amabini akhuselweyo ukuze ikwazi ukoyisa imiqobo ejikeleze i-3 yeesentimitha, kunye nevili elingenasiphelo elikhokelela kwisixhobo kunye nebrashi yecala elinye.
Ngasemva Itanki yokungcola ihleli, itanki yamanzi, eya kuthi iqhotyoshelwe kule ikhankanywe ngasentla, kunye ne-mop ehambelana neVelcro. Senza, nangona kunjalo, sinokutshintshwa kwe-ON / OFF, into engazange ibonwe ngolu hlobo lwemveliso kungekudala kwaye ixabisa ngokunyanisekileyo, ngakumbi ukuba siceba ukungayisebenzisi ixesha elide, u-Eufy ubonise kakuhle.
Ekugqibeleni, kwindawo ephezulu, njengoko sesitshilo, sinesiseko seglasi epholileyo, iqhosha elinye loqwalaselo kunye nolawulo kunye ne-WiFi yoqhagamshelwano lwe-LED isalathisi, akukho nto iphawulekayo.
Kwicandelo lobugcisa, sinakho Unxibelelwano lweWiFi ukuvumelanisa iRoboVac G20 Hybrid yethu kunye ne-Eufy app, ekhoyo kuzo zombini iOS njengoko Android ngokupheleleyo simahla. Sikwanayo ne-gyro sensor yokukhangela, kunye nochungechunge lwezinzwa ezigxininise kwirobhothi engawi kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo. Okufanayo ngokwamandla okufunxa, okuthi iya kujikeleza phakathi kwe-1.500 kunye ne-2.500 Pa ngokweemfuno zethu, umphezulu ochongiwe kunye namandla esiwabele ngesicelo.
Ukucoca kunye nokusebenza
Xa sele silungelelanise irobhothi ngesicelo Eufy Ekhaya siya kuba nakho ukutshintshiselana phakathi kweendlela ezine zokufunxa kunye ne "scrubbing" mode. Esi sixhobo, nangona singenayo i-laser navigation system, sisebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-Smart Dynamic Navigation, oko kukuthi, isebenzisa imigca ehambelanayo endaweni yenkqubo ehleliweyo, evumela ukuba ichaneke kwaye isebenze kakuhle ekucoceni.
Sinenkqubo ye khuhla ngokusebenzisa i-mop emanzi, leyo, njengoko uyazi kakuhle, inomtsalane kwimigangatho yeplanga kunye nomgangatho, kodwa ishiya "amanqaku afumileyo" kwimigangatho ye-ceramic.
Ingxolo ephezulu eyikhuphayo ngama-55dB into ephawulekayo ngokuqwalasela umthamo wayo wokufunxa kunye nobukhulu besixhobo, kwaye yeyokuba enye yezakhiwo zase-Eufy ngokuchanekileyo ukubheja kwirobhothi ethuleyo engabonwa. Okokugqibela, kufuneka sikhumbule ukuba siya kukwazi ukuyingqamanisa nayo Alexa ngalo lonke ixesha siye sakwazi ukuyiqwalasela kunye nesicelo ngokukhawuleza.
Ukucoca indawo (kwizangqa)
Ngokuphathelele ukuzimela, Siza kuhamba phakathi kwemizuzu eyi-120 esinika yona ngemowudi ethuleyo yokufunxa ubuncinci, ilandelayo ngemizuzu ye-70 yokucoca kwimodi eqhelekileyo kwaye malunga nemizuzu engama-35 ukuba siyibeke kweyona ndlela iphezulu yokufunxa.
Kweli nqanaba sijongene nerobhothi esebenza ngeendlela ezininzi, egqamayo ikakhulu ngokuthula kwaye ixinene, kude lee kwezinye izinto zokuzenzisa ezisikelwe umda ekwenzeni imisebenzi yayo ngendlela engangeneleli. Ukuzimela kwanele kwaye amandla okufunxa ayamangalisa, ngakumbi ngokuqwalasela imilinganiselo yesixhobo.
Isicelo sinoluhlu lwemisebenzi elinganiselweyo ehambelana neempawu zesixhobo. Ngokuqinisekileyo siyadibana Ngaphambi kokuba kufakwe enye indawo kuluhlu oluphakathi kwixabiso elithe lathengiswa eSpain ngama-euro angama-300, nangona sele ungayifumana ngokuthe ngqo kwi teufy kwivenkile ye-intanethi. Kwakhona kufuneka sivavanye ukuba ngaba kufanelekile ukuthenga izixhobo ngexabiso elifanayo elibonelela ngeempawu ezithe chatha, okanye ukubheja kwifemu eyaziwayo esebenza kunye nokuqina kwayo okuqinisekisiweyo. Ngeli xesha ukucoca kwethu, ukufunxa, ukuzimela kunye namava engxolo ngale Eufy RoboVac Hybrid G20 ibentle.
Ithunyelwe nge: 15 Matshi we2022
Utshintsho lokugqibela: 15 Matshi we2022
iba mdaka lula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Eufy RoboVac G20 Hybrid yokucoca ngobuchule kunye nolusebenzayo [Jonga]
I-Tronsmart inikezela nge-Bang 60W, isithethi esiphathwayo esikhohlakeleyo samaqela